INkantolo Enkulu kwelomshwalense wokulahlekelwa ngenxa yombhedukazwe - Bayede News
Sekuyinto eyaziwayo ukuthi ukhuvethe lugadle kwezwakala emabhizinisini emhlabeni wonke, lapha akukhulunywa ngamancane kuphela namakhulu imbala asenesikhathi eside abakhona.
Phezu kwalesi simo, izinqumo ezimbili zezinkantolo ngenyanga edlule, kubukeka zifake usawoti esilondeni ezinkampanini zomshwalense ezinkulu okuyiSantam Ltd ne-Old Mutual.
Lezi zinkampani ziyalelwe kuba zikhokhele amakilayenti azo alahlekelwe yinzuzo ngesikhathi sokhuvethe.
ISantam Ltd Mhla zili-17 kuLwezi wezi-2020 iNkantolo Enkulu eWestern Cape ithole ukuthi iSantam Ltd yayinomthwalo wokukhokhela amakilayenti ayo iMa-Afrika Hotels (Pty) Ltd (Ma-Afrika) neStellenbosch Kitchen abebeyimangalele ngokulahlekelwa inzuzo ngenxa yokhuvethe. Lezi zinkampani bezivikeleke ngaphansi komshwalense obhekelele ukuphazamiseka kwamabhizinisi. Lo mshwalense unengxenye yokuvikelela esimweni sezifo ezithelelanayo.
Lesi sinqumo singesinye sezibonelo sokuthi izinkantolo eNingizimu Afrika nakwamanye amazwe omhlaba ziwuthathela phezulu umgomo wokuphathwa kahle kwamakhsimende.
Kuleli cala, iNkantolo Enkulu ibeke ukuthi okubalulekile ukuba kubhekwe ukuhunyushwa kamapholisi omshwalense abamangali, kubhekwe ubunjalo bawo nobungozi obabuvikelwe nokuthi lobu bungozi yibo yini obuyimbangela yokuphazamiseka kwebhizinisi nokulahlekelwa abamangali ababhekana nabo.
Ukuze kufinyelelwe esinqumweni, iNkantolo Enkulu ibheke imbangela eseduze yokulahlekelwa kwala mabhizinisi yabe isihlola ubuqiniso nembangela yomthetho ehambisana namaqiniso akuleli cala.
INkantolo ibe isebheka icala elifanayo lase-United Kingdom (UK) ebeliphakathi kweThe Financial Conduct Authority v Arch Insurance (UK) Ltd and others (FCA Test Case). Isinqumo kuleli cala sakhishwa mhla zili-15 kuMandulo wezi-2020.
Okwakusemqoka kuleli cala lase-UK ukuthola ukuthi kungaba yini imbangela yokulahlekelwa kwebhizinisi ukuze umshwalense ukhokhe okungaba ukuhlasela kokhuvethe endaweni ethile noma ukuvalwa kwebhizinisi kulandela izivimbelo zikaHulumeni ngenxa yokhuvethe.
Abehluleli bathola ukuthi ipholisi yomshwalense okukhulunywa ngayo ibhaleke kahle, ibingadingi ukuthi ukuhlasela kokhuvethe kube sendaweni eseduze ngenxa yobunjalo besifo esingasabalala.
Inkantolo yaphetha ngokuthi ezinye izimbangela eziveziwe azinasisekelo ngenxa yokuthi ukubheduka kokhuvethe nemizamo kaHulumeni neyomphakathi yokubhekana nokhuvethe kwadala ubungozi.
Indlela esetshenziswe yinkantolo yase-UK maqondana nokwakhiwa kwepholisi yomshwalense iholele ekutheni izigweme izimbangela ebezivelile ngokuthi ifinyelele ekutheni ingozi evikelwe umshwalense yayakhiwe ukubheduka kokhuvethe nemizamo kaHulumeni nomphakathi yokubhekana nalo.
Kuleli-ke lakwaSantam, iNkantolo Enkulu ikubalulile ukuthi izigameko zikazwelonke nezomhlaba (ukhuvethe) bezicatshangiwe futhi zivikelwe ngokwepholisi yomshwalense.
INkantolo Enkulu imile ekutheni umqondo kuleli lase-UK maqondana nezimbangela uyakholakala ngakho-ke ibe isifinyelela ekuthini ukhuvethe nendlela uHulumeni aphathe ngayo olwalolu bhubhane kuyingxenye efanayo yobungozi obuvikelwe ipholisi yalo mshwalense.
INkantolo Enkulu yaneliseka kuthi wonke amaqiniso nezimbangela zomthetho kutholakele maqondana nokubhalwe kupholisi. Kanjalo, iNkantolo ifinyelele ekutheni indlela kazwelonke yokulwa nokhuvethe olukhona nasezindaweni eziseduze kwakwanele ukuhlangabezana nemibandela yepholisi.
“Ukuba akubanga ukhuvethe nezinyathelo zikaHulumeni, ibhizinisi labamangali belingeke liphazamiseke futhi bebengeke balahlekelwe. Ngokubona kwethu ukulahlekelwa kwabamangali yilokho kanye abebezivikele ngomshwalense kukhona,” kufundeka isinqumo seNkantolo.
I-Old Mutual Mhla zingama-25 kuLwezi wezi-2020 iNkantolo Enkulu eCape Town iyalele inkampani i-Old Mutual ukuba nayo ikhokhele izindleko zokulahlekelwa ngenxa yokhuvethe isikhathi esiyizinsuku zeziyisi-6 ikilayenti layo i-Interfax. Le nkampani inezitolo zezikhwama (Luggage Warehouse) eV&A Waterfront, eKennilworth naseBellville eKapa. Iphinde itholakale naku-inthanethi.
UMqondisi we-Interfax, uMnu uChris Warncke, utshele iNkantolo ukuthi imvalelwakhaya izishaye kakhulu izitolo zabo kanjalo nemisebenzi yezisebenzi zabo ezingama-40.
Le nkampani inomshwalense wezigidi ezili-R17.6 oqondene nokuphazamiseka kwebhizinisi kanti ufaka nokulahlekelwa ngenxa yezifo ezithelelanayo.
Njengezinye izinkamapani zomshwalense, nayo i-Old Mutual isichithile isicelo sokukhokhelwa se-Interfax okuholele ekutheni le nkampani ilibangise eNkantolo iyokhulekela ukuba ikhiphe umyalelo ophoqa i-Old Mutual ukuba iyikhokhele.
Kumenyezelwe izinguquko ezinqala kuPSL
Ekhipha isinqumo uMehluleli uDennis Davis uthe le nkampani yomshwalense izithethelela ngokuthi ukhuvethe lusabalele yonke indawo, isigaba esikupholisi yomshwalense we-Interfax sidinga ukuthi isifo esibhedukile esiphazamise ibhizinisi futhi salilahlekisela sibe sendaweni esondelene nekilayenti.
“Ngamanye amazwi okushiwo u-Old Mutual ukuthi isigaba sidinga kuthi isifo sibheduke endaweni engamakhilomitha angama-50 ezakhiweni (Luggage Warehouse).
Ngokwabo bekuwukuthi ipholisi ayimukhavi ummangali lapho isifo nemizamo yokubhekana naso kukuzwelonke,” kusho uMehluleli uDavis.
Kodwa, uMehluleli uDavis uthe uma umshwalense usuyidayisile ipholisi enamagama avikela ikilayenti esifweni esifana nokhuvethe, kunzima ukunqaba ukukhokha.
Uyalele i-Old Mutual ukuba ibheke isicelo se-Interfax bese iyasikhokhela ngendlela esheshayo nenobuqiniso.
Lokhu kulandele impikiswano mayelana nesicelo senkokhelo yesikhashana saleli bhizinisi yezigidi ezi-R4.8 yangoMbasa, uNhlaba, uNhlangulana nengxenye yangoNdasa.
UMehluleli uDavis uthe: “Le nombolo incike ezibalweni zomcubunguli… ozimele…ohlawumbisele isilinganiso senzuzo ngalesi sikhathi yezigidi ezili-R10.6 nenzunzo yempela eyisi-R1.3.”
Uthe imigomo yokuziphatha yebhizinisi ingayeseka inkokhelo yesikhashana kodwa njengoba ipholisi yomshwalense ibingayihlinzeki le nkokhelo, iNkantolo ayikwazi ukukhipha umyalelo kulokhu.
INkantolo iyalele i-Old Mutual ukuba ikhokhe izindleko zecala.
nguSabelo Mbatha Dec 4, 2020